Izindaba - UBontai ube nempumelelo enhle kwiBauma 2019
Izicathulo zokugaya zikaDayimane
Amaphara wedayimane we-Trapezoid
Ama-pads wedayimane we-HTC
Amaphilisi we-Lavina wedayimane
Husqvarna amadayimane wedayimane
Ama-pads amadayimane weTerrco
Ama-Scanmaskin amadayimane wedayimane
Amaphilisi wokupholisa amadayimane
Pads ukhonkolo pads
Ama-PCD edayimane okususa imbobo
UBontai ube nempumelelo enhle kwiBauma 2019
Ngo-Ephreli 2019, uBontai wabamba iqhaza eBauma 2019, okuyisigameko esikhulu embonini yezokwakha imishini, ngobunikazi bayo nemikhiqizo emisha. Eyaziwa ngokuthi ama-Olimpiki emishini yokwakha, i-expo ingumbukiso omkhulu kunayo yonke emkhakheni wemishini yokwakha yaphesheya enomphumela omuhle kakhulu wokubukisa kanye nenombolo enhle kakhulu yababukeli.
Imikhiqizo kaBontai kulo mbukiso ibandakanya amabhlogo okugaya amadayimane, amadiski wokugaya amadayimane / amapuleti, amasondo endebe yedayimane, amabhulukwe e-polishiing neminye imikhiqizo eminingi. Ngesikhathi lombukiso, sazizwa sinentshisekelo yabakhombisi nabavakashi abavela kuwo wonke umhlaba. Sibe nengxoxo evuthayo namakhasimende ethu ngezindlela zakamuva zentuthuko zomkhakha, futhi sabelana ngemikhiqizo yethu yakamuva nobuchwepheshe.
IFuzhou Bontai Diamond Tools Co, Ltd yasungulwa ngonyaka ka-2010, inomenzi wayo onguchwepheshe wokuthengisa, ukuthuthukisa nokwenza ezinye izinhlobo zamathuluzi edayimane. Sinezinto ezahlukahlukene zamathuluzi okugaya nedayimane wokupholisa phansi wesistimu yephayiphu yaphansi, sifaka izicathulo zokugaya idayimane, amasondo endebe yedayimane, amadiski wokugaya amadayimane namathuluzi e-PCD. Ukusebenza ekugayeni kwezinhlobonhlobo zekhonkolo, i-terrazzo, phansi kwamatshe namanye amaflethi okwakha. Siyaqhubeka nokuhlangabezana nezidingo zomuntu ngamunye zamakhasimende ethu, imikhiqizo eyenziwe ngezinto ezinhlobonhlobo, sithuthukisa inani lemikhiqizo yethu, futhi ngokuqhubekayo sakha inani eliningi kumakhasimende ethu. Lwela umhlinzeki wamathuluzi wedayimane amahle kakhulu emhlabeni.
Isikhathi sokuthumela: Mar-06-2020